Ny fampifanarahana sy ny famaliana ny valiny dia mitondra valiny amin'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Ny fahombiazan'ny mpivarotra haingana sy mahomby ary mampifanaraka ny hevitry ny mpanjifa mitohy dia lasa famaritana vaovao amin'ny fahombiazan'ny marika. Araka ny 90% amin'ireo mpivarotra marika 150 nanaovana fanadihadiana, ny fandraisana andraikitra — na ny fahaizana mitovo, mahatakatra ary avy eo mamaly haingana ny fanehoan-kevitra, ny safidiny ary ny filàna dia zava-dehibe, raha tsy manakiana, amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa miavaka.
Ny 16 isan-jaton'ny mpivarotra ihany no mahatsapa ny fikambanan'izy ireo mandray andraikitra lehibe amin'ny mpanjifa, tsy mahavita manova ny vokatra, fonosana, serivisy ary traikefa mifototra amin'ny fangatahana sy valiny omen'ny mpanjifa tena izy.
Sintomy: ny fepetra takiana amin'ny fandraisana andraikitra
Ny tatitra dia manome tsipiriany momba ny fihetsiky ny mpivarotra mailamailaka amin'ny hevitry ny mpanjifa mba hitomboan'ny fitomboany. Vokatry ny fanadihadiana lalina natao nataon'ny filankevitra CMO niarahana niasa Sehatra famaritana ny vokatra Danaher Corporation orinasa, izay manavao ny rojom-pamokarana famokarana entana sy vokatra.
Ny fanadihadiana dia nanadihady ny fomban'ny fikambanana raha miresaka ny valin'ny mpanjifa sy ny fampiasana ny angon-drakitra sy ny faharanitan-tsaina ny mpanjifa mba hanomezana ny traikefa mety amin'ny fotoana mety sy amin'ny alàlan'ny fantson'ny safidin'ny mpanjifa, na lafiny ara-batana izany na nomerika.
Olana voalohany manemotra ny fandraisana andraikitra amin'ny marketing
Tsy fahampiana ny teti-bola handroso amin'ny fanavaozana matetika kokoa ny toe-batana
Tsy manana ny angona na faharanitan-tsaina hanao fanovana miorina amin'ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny fitondran-tenany
Ekipa mandeha miasa misaraka marketing avy amin'ny fanapaha-kevitra momba ny vokatra sy ny fonosana
Tsy afaka ny mpivarotra miasa haingana na mihaona amin'ny fandaharam-potoana haingana
Mba hamahana ireo olana ireo dia tsapan'ny mpivarotra fa hisy fiovana ara-kolontsaina, ao anatin'izany ny fizotrany sy ny fitaovana vaovao hanatanterahana fanovana haingana kokoa, satria 60 isanjaton'ireo valinteny mino fa ny fifantohana amin'ny mpanjifa amin'ny vokatra dia mila atao mba hisian'ny fandrosoana lehibe hatao. .
Manantena tanteraka ny mpanjifa mba hirotsaka amin'ny haingam-pandehan'ny hazavana ny mpanjifa - aorian'izany dia fanandramana miavaka amin'ny mpanjifa toa ny Amazon sy Starbucks izay nanaporofo fa azo atao ny mandray valiny haingana, fanokana ho an'ny tena ary ny fotoana tena (na akaiky ny fotoana tena izy). amin'ny tsindry bokotra iray na tsindrio fampiharana. Izany dia ny firosoana amin'ny hafainganam-pandehan'ny dizitaly, ary ny mpanjifa dia manantena haavon'ny fandraisana andraikitra mitovy amin'ny traikefa rehetra, na inona na inona ara-batana na nomerika ilay fantsona. Liz Miller, filoha lefitra Senior an'ny Marketing an'ny CMO Council
Amin'ny ankapobeny, ny mpivarotra dia mahatsapa fa afaka mamaly na mamaly ny hevitry ny mpanjifa, ny fangatahana, ny tolo-kevitra na fitarainana manokana momba ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing ao anatin'ny roa herinandro.
Ekipa mpivarotra haingam-pandeha no mitady hamaha ity banga fanatanterahana sy fifamofoana ity satria ny 53 isan-jaton'ireo namaly dia nanaiky fa ny tanjon'izy ireo dia ny hitondra fanavaozana sy hanao fanovana ireo teboka ara-batana ao anatin'ny 14 andro, miaraka amin'ny 20 isan-jaton'ny mpivarotra no manantena hahita io banga io ety amin'ny 24 fotsiny. ora handefasana vaovao farany amin'ny traikefa ara-batana.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana ao amin'ny Danaher Corporation — izay misy ny portfolio-dry zareo toa ny Pantone, MediaBeacon, Esko, X-Rite ary AVT — raha toa ka havadika ho tombony mifaninana marina ny fandraisana andraikitra amin'ny haino aman-jery ara-nofo dia tokony hapetraka ny fanontaniana lehibe ary tokony horaisina ny fepetra .
Soso-kevitra hanatsarana ny fandraisana andraikitra:
Hamafa ny mpamorona atiny rehetra: Mampiasa rafitra misaraka ve ireo ekipa ireo ankehitriny? Azontsika atao ve ny manararaotra ny iray hanala ny vidin'ny hafa?
Ampifandraiso amin'ny teknolojia mangarahara amin'ny fotoana tena izy: Firy ny teknolojia ampiasaintsika hitondrana ny seraseranay ho an'ny mpanjifa ara-batana sy nomerika rehetra? Aiza ny tanana tsy mahomby?
Aza mifantoka amin'ny sangan'asa iray fotsiny fa mieritreritra ny fomba ahafahantsika manao manamora ny rojom-bidy rehetra: Inona no mety ho vokany eo amin'ny orinasantsika raha toa ka antsasaky ny ankehitriny ny fotoana hivarotana fifandraisana ara-batana sy nomerika?
Miaraka amin'ny fandrosoana lehibe farany teo amin'ny famoahana haino aman-jery nomerika, indrisy, ny fahafaha-manao fanovana amin'ny haino aman-jery ara-batana dia taraiky. Betsaka ny olona tsy mahalala izay azo atao raha tsy efa nanapa-kevitra izy ireo fa hanao izany. Ny fandrosoana amin'ny teknolojia ankehitriny dia mamela ireo mpitarika orinasa hitaky hafainganam-pandeha bebe kokoa, avo lenta ary mangarahara bebe kokoa amin'ireo mpiara-miasa sy mpivarotra noho ny teo aloha. Mbola matanjaka kokoa aza ho an'ny marika manerantany ny fisian'ny teknolojia toy izany manerana an'izao tontolo izao. Joakim Weidemanis, Mpanatanteraka vondrona ary filoha lefitra, Famantarana ny vokatra ao amin'ny Danaher Corporation
Inona no atiny Touchpoints misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana?
Ny fikarohana dia notontosaina tamin'ny lohataona 2017 ary misy ny fidirana avy amin'ny mpitantana ambony ara-barotra mihoatra ny 153. Efatra dimam-polo (54) isan-jaton'ireo namaly no manana titre CMO, Lehiben'ny Marketing na filoha lefitra Senior an'ny Marketing, ary 33 isan-jato dia maneho marika manana fidiram-bola mihoatra ny $ 1 miliara (USD).
Tags: AVTfilankevitra cmoContent MarketingCSRSerivisy ho an'ny mpanjifaDanaher CorporationEskoMediaBeaconPantonetompon'andraikitraNy fepetra takiana amin'ny fandraisana andraikitraX-fombam-pivavahana